अर्थ Archives - Page4of6- khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
Posts Categorized: अर्थ
थेचो महिला जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक रमिता महर्जन
Posted On November 24, 2016 Author siteadmin Category अर्थ, सामाजिक.
थेचो महिला जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक रमिता महर्जन सहकारीको दैनिक काममा रमाउँदै आएकी छिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षको अनुभव सँगालेकी महर्जनले सहकारी सामाजिक क्षेत्र भएकाले काम गर्दा आनन्द आउने बताउँछन् । आफ्नो समुदायको हितका लागि सहकारीमार्फत काम गर्न पाएकोमा उनी खुसी छिन् । भन्छिन्–‘हाम्रो सहकारीमा सबै यहीँ क्षेत्रका दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरुको… Read more »
Posted On November 15, 2016 Author siteadmin Category अर्थ.
काठमाडौं- नेपालमा रहेको पाँच सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा दिन रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई ) ले अस्वीकार गरेको छ । यससँगै सर्वसाधारणसँग रहेको दसौं अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) कागजको खोस्टासरह हुनेछ । भारतीय सरकारले ५ सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालसँग भएका ती दरका नोट साट्ने… Read more »
नो लोडसेडिङको कारण लुकाइएको बिजुली
Posted On November 8, 2016 Author siteadmin Category अर्थ, सामाजिक.
काठमाडौं: विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवार तहमा रहेका केही अधिकारीले ‘लुकाएर वितरण गरेको’ बिजुली लोडसेडिङको दायरामा ल्याई सबैलाई समानुपातिक रूपमा आपूर्ति गर्दा राजधानी उपत्यकालगायत देशका प्रमुख स्थानमा लोडसेडिङ तत्कालका लागि हटेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ९ घन्टासम्म बिजुली आपूर्ति कटौती हुँदै आएकोमा त्यसलाई ‘व्यवस्थित’ गरिएकाले लोडसेडिङ कम भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘हामीले… Read more »
Posted On October 17, 2016 Author siteadmin Category अर्थ.
काठमाडौं- सरकारले कम्पनी ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन गर्दै कम्पनी दर्ता र दर्ता खारेज गर्न सजिलो बनाएको छ। कात्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषद, विधेयक समितिले कम्पनी ऐन पहिलो संशोधन गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने र दर्ता खारेज गर्दा धेरै जरिवाना तिर्न नपर्ने बनाएको छ। कम्पनी ऐनको पहिलो संशोधन गरेर कम्पनी दर्ता र खारेजलाई सजिलो… Read more »
Posted On June 25, 2016 Author siteadmin Category अर्थ.
१० असार, काठमाडौं । विदेशबाट आउने नेपालीले अब सुन र चाँदीका तयारी गहनामात्रै ल्याउन पाउने भएका छन् । साउन १ गतेदेखि झिटीगुण्टामार्फत अब ५० ग्रामसम्म सुनका गहना मात्र ल्याउन पाउने नयाँ नियम लागू गरिएको हो । यति सुनका गहना ल्याउँदा कुनै भन्सार शुल्क लाग्ने छैन । ५० ग्राम भन्दा बढी तयारी गहना ल्याएपनि अब विमानस्थलमा… Read more »
नेपालले विजुली उत्पादन गर्न नसक्नुर लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने कारण खुल्यो भिडियो हेर्नुस
Posted On March 26, 2016 Author siteadmin Category अर्थ.
काठमाडौं – नेपालले विजुली उत्पादन गर्न नसक्नुर लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने कारण विजुली उत्पादन गर्न नसक्नु का खुल्यो , भिडियो हेर्नुस